Kutheni kukho ukunqongophala kweoksijini kwizigulana ezinesifo?
Kutheni ezinye izibhedlele zingenayo ioksijini yokugcina izigulana ziphila
Isidingo seoksijini sehlabathi sikhule kude ngaphaya konikezelo olukhoyo ezibhedlele, ngakumbi e-India- omnye umzekelo wendlela ilizwe elalingakulungelanga ngayo ukujongana nobhubhane weCovid-19.
Into eyoyikisayo yakutshanje kulo bhubhani kukuba inani elikhulu labantu kwihlabathi liphela bayafa kukuswela ukufikelela kwioksijini yezonyango, ngakumbi eIndiya . Yonke imihla, amashumi amawaka abantu ayangeniswa ezibhedlele ngeCovid-19, ekhokelela kwimfuno yeoksijini engaphaya kokubonelelwa.
I-oksijini yenza iipesenti ezingama-21 zomoya. Iinkampani ezimbalwa ziyayibamba kwaye ziyicoce ngobuninzi, kodwa uninzi lwazo ziyazithengisa kumzi mveliso. Imimandla emininzi ehlwempuzekileyo ayinaziseko zonikezelo okanye zokusebenzisa inqanaba lezonyango elithengisiweyo.zezi nkampani, eziyilelwe ukuhanjiswa ngombhobho kumagumbi ezibhedlele.
Ezinye izibhedlele kunye neeklinikhi zinomatshini ovelisa i-oksijini ehlambulukileyo kwinqanaba elincinci kakhulu, kodwa ezi zinqabile. Izibhedlele ezininzi kunye nezigulana kumazwe ahlwempuzekileyo kunye neendawo ezikude zixhomekeke kwezona ndlela zibiza kakhulu: iindawo zokugcina ioksijini eziye zanqaba kumazwe achaphazeleka yintsholongwane.
Ukunqongophala kuchaphazela izigulana ezinazo zonke iintlobo zengxaki yokuphefumla efuna ioksijini, hayi ezo zineCovid kuphela.
Umbutho wezeMpilo weHlabathi wathi ngoFebruwari kuyakuthatha i-1.6 yezigidigidi zeerandi ukulungisa ukusilela kweoksijini unyaka; ngoku uqikelelo lumi kwi-6.5 yezigidigidi zeedola. Iinzame zokuqokelela le mali zisilele, nangona iqhezu nje elincinci loko kuchithwe kwizitofu zokugonya kunye nenkxaso yemali yabantwana.iinkampani nabasebenzi.
Nazi iimpendulo kweminye imibuzo ebuzwe malunga nengxaki yeoksijini.
enye Umsebenzi ogcwalisa iitanki zeoksijini njengenkonzo yasimahla enikezelwa ngurhulumente eIztapalapa, eMexico. Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, imfuno engapheliyo yeoksijini yezonyango iphindaphindwe kathathu. Ityala ... uLuis Antonio Rojas weHfrance.fr
Njani ukuba mbi kangaka, ngokukhawuleza ?
Ngenxa yesidingo esikhulu kunye nesicacileyo seoksijini ngexesha lobhubhane oluchaphazela inkqubo yokuphefumla, ingxaki ayifanele ibe yinto emangalisayo. Kodwa ngonyaka apho umenzi wesigqibo esuka komnye umceli mngeni wobhubhane esiya komnye - u-P.P.E. ukunqongophala, ukutshixeka, isoyikiso sokuwa kwezoqoqosho, ukuhamba umgama esikolweni, unyango, izitofu -ukubonelelwa ngeoksijini akuzange kufikelele encotsheni yoluhlu.
babenokubaluleka ngokwaneleyo, utshilo uRoU-bert Matiru, umlawuli wenkqubo e-Unitaid, elinye lamaqela ezempilo oluntu asebenza ukulungisa le ngxaki kunye noMbutho wezeMpilo weHlabathi. Kwanangaphambi kobhubhane, ezinye zeendawo ezihlwempuzekileyo azikwazanga ukuqinisekisa ukubonelelwa ngokwaneleyo. Kodwa kwade kwangoko kulo nyaka apho ukunqongophala kweoksijini okubulalayo kwafika emantla eBrazil ,
, nakwezinye iindawo, apho kwacaca ukuba into ebonwa njengengxaki enokubakho iya isiba imeko kaxakeka. Umbutho wezeMpilo weHlabathi udale iqela elongxamisekileyo lokunqongophala kweoksijini kwaye wafuna imali yokujongana nayo. Emva koko
ubhubhane uqhushumbe eIndiya
, apho bekuqulathwe khona, ukuhambisa izinto zeoksijini kwiziko lehlabathi. Inani elisemthethweni laseIndiya losulelo olutsha lwe-coronavirus lenyuke ukusuka kumyinge we-11,000 ngemini phakathi kuFebruwari ukuya kwinyanga.I-yenne yemihla ngemihla engaphezulu kwama-370,000 kwiveki ephelileyo- kwaye iingcali zithi elona nani liphezulu liphezulu kakhulu. Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, isidingo esingafezekiswanga seoksijini yonyango sesiphindaphindwe kathathu ukusuka ngaphantsi kwesigidi se-9 seekyubhiki ngemini ukuya kuthi ga ngaphezulu kwezigidi ezingama-28, ngokweqela lomanyano loncedo olu
ukubeka esweni ingxaki
Malunga nesiqingatha salesi sidingo singafezekanga siseIndiya. Kwaye abameli bezempilo balumkisa ukuba le ntlekele inokuphinda ibekho kwamanye amazwe.
Imifanekiso Itanki leoksijini elulwelo esibhedlele e-El Paso. Ityala ... UJoel Angel Juarez weHfrance.fr
Yenziwe njani ioksijini kwaye ibonelelwa njani?
Kumazwe atyebileyo, izibhedlele zihlala zixhomekeke kwiitanki ukwenza uhanjiso oluninzi lweoksijini engamanzi, eshinyeneyo kunomoya oqhelekileyo, ogcinwe kwizikhongozeli ezinkulu. Inkqubo yeImibhobho ifunxa irhasi, ivumele ukuba inabe iye kubuninzi obuqhelekileyo, kwaye isasaze kuzo zonke iibhedi. Le yeyona ndlela ineendleko ezifanelekileyo yokubonelela ngeoksijini, kwaye iinkampani ezibonelela ngeoksijini ngobuninzi zinamandla emveliso afanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zonyango. Kwezi veki zidlulileyo, abanye babo baqale
ukukhawulezisa imveliso yabo yezixhobo zonyango ngokuguqula inxenye yeshishini
, enegesi eneemfuno ezahlukeneyo.
Urhulumente waseIndiya uyalele abavelisi ukuba bathumele okwexeshana yonke imveliso yabo yeoksijini kwiimfuno zonyango.
Kodwa izibhedlele ezininzi kwihlabathi liphela azixhotyiswanga ukusebenzisa ioksijini engamanzi, ukuswela ityhubhu ukuyihambisa kwizigulana, kwaye akukho nkqubo yokuhanjiswa isendaweni kwiindawo ezininzi ezikude.
I-Oxygen inokufumaneka kwakhona kwifom encinci yegesi, kwi-diibhotile ezifuna ukuzaliswa rhoqo. Oku kuhlala kuyindlela ebiza kakhulu- inokubiza amaxesha angama-10 ngaphezulu kwe-oksijini engamanzi eninzi-kodwa yiyo kuphela efumanekayo ebantwini kwiindawo ezikhulayo zehlabathi.
Ukuqonda ingxaki ye-Covid e-India
: Ukunqongophala kweoksijini kunye neebhedi zesibhedlele, kunye neqondo lokugonya eliphantsi, kuyonyuse ispike kwizifo nasekufeni eIndiya. Inani lamatyala: Iingcali zithi owona mqobo wokufa udlula kude amanani asemthethweni
. Lo mzobo ubonakalisa
ukuba amatyala aziwayo eCovid anyuke njani kwiinyanga ezidlulileyo kwilizwe liphela. Ukuvalwa kokuhamba:
I-United States iqale ukuthintela uhambo olusuka e-India, kwaye
i-Australia iluthintele lonke uhambo olungena ngaphakathi kweli lizwe, kubandakanya phakathi ngabemi bayo.
Abanikeli kwihlabathi liphela banikela ngemali yokutya, iindleko zonyango, i-P.P.E. kunye neetanki zeoksijini, phakathi kwezinye izinto eziyimfuneko.
Ezinye izibhedlele zineefektri zazo zokukhupha ioksijini emoyeni, itekhnoloji eyaziwa ngokuba kukufunxa koxinzelelo okanye iPSA Kodwa iinkqubo ziyabiza, kwaye isibhedlele siyayithenga kufuneka sifakele inkqubo yombhobho yokuhambisa ioksijini Ibhedi.
Kukwakho nezixhobo ezincinci ezibizwa ngokuba yioksijini ezijolise kwisigulana esinye okanye ezimbalwa. Nangona umntu enokubiza amakhulu amawaka eedola, umqobo ophambili kumazwe ahluphekayo, imfuno yazo inyuke ngokukhawuleza kunokuba abavelisi benako.bavelise.
Imifanekiso Ikhemesti kwilali yaseTuscan yaseCastellina eChianti, e-Italiya, imigca iinkonkxa zeoksijini ezingenanto ngasemva kwikhemesti. Ukubonelela ngeoksijini kwiinkonkxa kubiza amaxesha ali-10 kunokuyihambisa ngesixa esikhulu. Ityala ... uNadia Shira Cohen weHfrance.fr
Yintoni efunekayo ukusombulula le ngxaki?
Imali kunye nexesha.
Abameli bezempilo boluntu bathi izibhedlele kufuneka zibe neendawo zePSA kunye nemibhobho ehamba nayo, kodwa kumazwe ahluphekileyo esi sisombululo sinokuxabisa ngokungathethekiyo, sinokufumaneka ngoncedo lwamanye amazwe. Urhulumente wase-India uceba ukufaka izixhobo kumakhulu ezibhedlele, kodwa kungathatha iinyanga.
Iinkampani ezenza iifektri ze-PSA kunye ne-oxygen concentrators zikhawulezisa imveliso kwihlabathi liphela, kodwa nako kuthatha ixesha. Abavelisi beoksijini abaninzi kunye lOorhulumente bahlala bezama ukuhlengahlengisa imixokelelwane yokuhambisa igesi ebalulekileyo apho ifuneka khona kakhulu. E-Indiya, urhulumente usebenzisa oololiwe nkqu
neenqwelomoya zothutho lomkhosi
ukuzisa ioksijini kwabagulayo.
Ukuba imali eyaneleyo ibikhona, oorhulumente kunye namaqela angamazwe angaba nezivumelwano zokuthenga kwangaphambili kunye nabathengisi abaninzi, kunye nezinto zeoksijini ezingxamisekileyo zingafakwa kwi
Ukuba akukho nto iyenye, iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo zibonise ngokucacileyo ubunzima bokuzama ukwandisa izinto zeoksijini ngesaziso esifutshane, phakathi kwengxaki.
Endaweni yoko, uMnu. Matiru uthe: Umhlaba kufuneka utyale imali ngokulungiselela, "ukuze kwimeko yokunyuka kwamandla, singacinezela 'Yiya'.
Isivumelwano esabhengezwa nje sokuba uSirayeli anyuse iphulo lokugonya lasePalestine siyaphela.
2021-06-19 12:24:29 | Kwihlabathi
I-Israel ivumile ukuthumela ukuya kuthi ga kwi-1.4 yezigidi zeedosi, ukuba itshintshwe kamva ngamaPalestine. Igunya lasePalestine lithe isiqwenga sokuqala sisondele kakhulu ekuphelelweni, nto leyo ayikhanyelayo i-Israel. ...
I-portugal iyalela i-lisbon ukuba ivale ngeempelaveki njengoko kusasazeka ukwahluka kwe-delta
2021-06-19 10:08:03 | Kwihlabathi
Eli nyathelo lize emva kokuba eli lizwe kule veki lirekhode elona nani liphezulu lamatyala amatsha ukusukela ngoMatshi, etsiba ngaphezulu kwe-1,300 kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. ...
I-UN iyakugxeka ukubhukuqwa kweMyanmar, ifuna ukubekelwa imiqathango
2021-06-19 09:22:06 | Umhlaba
Kwisenzo esinqabileyo, iNdibano yeZizwe eziManyeneyo igwebe umkhosi wamajoni eMyanmar kwaye yahlaba ikhwelo kuthintelo lwelizwe kwisisombululo esibonisa inkcaso kwihlabathi jikelele kwi-junta kwaye ifuna ukubuyiselwa kwenguqu yedemokhrasi yelizwe. Uvavanyo luka-Aung San Suu Kyi lwaseMyanmar oluvaliw...
I-kiwi iimfazwe: iziqhamo zegolide ezenza ubutshaba phakathi kwe-zealand entsha kunye ne-china
2021-06-19 09:18:54 | Umhlaba
Libali lamandla amakhulu ehlabathi, ukuhambisa ngokungekho semthethweni, isibetho kunye nesiqhamo esincinci esinoboya. Okukhoyo kwiindawo ezishelfini zevenkile kunye nakwiibhokisi zasemini, i-kiwi ethobekileyo yeyona nto ibalulekileyo yokuthumela ngaphandle eNew Zealand. Amadabi akutshanje olawulo l...
I-EU iyasilela ematyaleni ukufumana idosi engxamisekileyo ye-120 yezigidi ye-Oxford covid vaccine
2021-06-19 09:17:01 | Umhlaba
I-EU isilele kwilinge elisemthethweni lokufumana iidosi zokugonya ezingxamisekileyo ezingama-120 ezigidi e-AstraZeneca ekupheleni kwenyanga, ngelixa iqinisekisa isigwebo sokuba iisayithi ze-Oxford ne-Staffordshire bekufanele ukuba bezikade zisetyenziswa ukwenza unikezelo. Inkundla yase-Brussels yeFi...
Kukho iintsholongwane ezilinde emfihlekweni: ungabuphelisa njani ubhubhane olandelayo?
2021-06-19 08:41:09 | Umhlaba
Ekupheleni konyaka we-2019, uProfesa Stuart Turville wayefuna omnye umsebenzi. "Amaxabiso enkxaso-mali ayephantsi kakhulu ukuba angaphila, " Kodwa ngaphambi kokuba ahambe, ubhubhane weCovid-19 wabetha. Ngoku ukhokela ilebhu yokhuseleko lwezokhuseleko e-University of New South Wales, apho kufundwa ku...
'Endleleni yokuphela': ii-koalas kungekudala zinokudweliswa njengezisengozini kwiindawo ezithile kwimpuma ye-Australia
2021-06-19 08:28:01 | Umhlaba
Kungekudala iiKoalas zingadweliswa njengezisesichengeni eQueensland, eNew South Wales naseAustralia Capital Territory emva kokuba imililo yamadlelo itshabalalise abantu abasele besokola kwaye itshabalalise indawo yokuhlala enexabiso. yeNgxowa-mali yeHlabathi yeNtlalontle yezilwanyana...
Umntu obulewe emva kwenkanyamba ekrokrelwayo ehlasela iAuckland
2021-06-19 05:21:33 | Umhlaba
Kubhubhe umntu omnye kwaye abantu ababini bonzakele emva kwesityholo senkanyamba esithe sahlasela indawo yokuhambisa iimpahla kwisixeko sase-New Zealand iAuckland ngentsasa yangoMgqibelo. Abasebenzi bezomlilo nabo baphendule iminxeba eli-100 emva kokuba inkanyamba idlise ihlomela-dolophu lasePapatoe...
Amabhunga ase-UK akhanyela izicelo zokuhlawulwa zodwa ezizodwa ezintandathu kwezili-10
2021-06-19 05:12:16 | Umhlaba
Phantse ezibini kwisithathu sabasebenzi eNgilane abafuna izibonelelo zokubanceda bazihlukanise, abavunyelwa uncedo, kubangela izilumkiso ezivela kwimibutho yabasebenzi ukuba umgaqo-nkqubo ophambili wokunciphisa i-Covid-19 'uyasilela' xa ujongene nosulelo olukhulayo. kwizicelo ezili-10 nangona urhulu...
U-Bear wadutyulwa wabulawa emva kokuhlasela eSapporo, eJapan
2021-06-19 00:18:17 | Umhlaba
Abazingeli badubula babulala ibhere emdaka kumantla esixeko sase Sapporo eJapan emva kokuhlasela esixekweni, kwenzakala abantu abane, kubandakanya nejoni. Ngaphambili, iindaba ezothusayo zabonisa ibhere ixhuma kwisitalato esihlala abantu, iwela indlela exakekileyo kwaye isika ibhere. ...
Abantu baseHong Kong bakulayini yokuthenga iikopi zemihla ngemihla zeApple emva kokubanjwa komhleli oyintloko
2021-06-19 00:16:47 | Umhlaba
U-Hong Kongers udweliswe kwiindawo zokuthengisa iindaba zedolophu ngaphambi kokusa ngolwesiHlanu ukuze athenge ushicilelo lwamva nje lwephephandaba i-Apple Daily, usuku emva kokuba amaPolisa oKhuseleko kuZwelonke ebambe umhleli wawo kunye nabanye abalawuli abane. Ngolwesine kusasa, amakhulu amagosa ...
Umphengululi wase China unqunyanyisiwe ngenxa yokuxhasa isithembu
2021-06-19 00:11:55 | Umhlaba
Umphengululi wase China unqunyanyisiwe yiyunivesithi emva kokuxhasa isithembu kwiakhawunti yakhe ye-WeChat, evusa ingxoxo entsha malunga nokutshintsha kwesimo sengqondo e-China malunga nezesondo. UBao Yinan, umphandi wezomthetho kwiYunivesithi yodumo yezeNzululwazi zezoPolitiko kunye ne-East Chinese...
I-netherlands inikezela ngehering yasimahla njengenkuthazo ye-covid jab
2021-06-19 00:10:14 | Umhlaba
Emva kokuba iRussia inikezele ngeemoto, i-spliffs evela kwilizwe laseWashington, iinkukhu eziphilayo ezivela eIndonesia naseHong Kong ezinokubakho indawo yokuhlala eyi- $ 1.2million, ilizwe lakutshanje lokuvuza abantu ababonisa imifanekiso yabo iCovid yiNetherlands - enetyiwa enetyiwa. I-Hollandse n...
Abantu zange bamamele: ukubulawa kukaJulie Douib kubangela umlo ngokuchasene nokubulawa kwabantu basetyhini eFrance
2021-06-18 23:50:59 | Umhlaba
UJulie Douib uxelele abantu abaninzi ukuba ucinga ukuba iqabane lakhe langaphambili liza kumbulala. Uxelele usapho lwakhe. Uye waxela emapoliseni amatyeli ali-10. Wade wabaxelela ukuba unompu kwaye esoyika ukuwusebenzisa, kodwa bathi akukho nto banokuyenza ngaphandle kokuba bayikhombe kuye. Okanye a...
Sisonke kuba siziva silungile: indoda engumFrentshi eya naphi na ngehobe
2021-06-18 23:49:19 | Umhlaba
Xa u-Xavier Bouget, oneminyaka engama-80, ehamba ngebhayisikile, ijuba elimhlophe elimhlophe likhwela umnqwazi wakhe. Xa encwina kwindawo yakhe yokusebenzela, ujongana nezoqheliso nezikhonkwane. Kwaye xa unkcenkceshela isitiya sakhe, uyamjonga egxalabeni lakhe. U-Bouget, umhlala-phantsi ovela kumant...